के तपाइको यस्तो बानि छ ? छिट्टै बुढ्यौलीतिर धकेलिनु होला है ! – 24updatemedia
त्यस्ता केही खराब बानीले हाम्रो स्वास्थ्यसँगै ‘एजिङ प्रोसेस’लाई पनि छिटो बनाइदिन्छन् । यदि हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा ध्यान पुर्‍याउने हो भने एजिङ प्रोसेसलाई सुस्त बनाउन छिटै हुने बुढापाबाट जोगिन सकिन्छ ।
Previous काठमाडौंमा बस्दै आएका यी १९ वर्षीयले गरे यस्तो पत्याउनै नसकिने काम, थाहा पाउदा उडयो सबैको होस् !
Next आज चितवनमा भएको एमालेको १०औँ अधिवेशनमा साँझ घट्यो अचम्मको घटना !